Marc Ravalomanana : Tafita ny hafatra -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Tafita ny hafatra
10/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nironjona tany amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) avokoa ny mason’ny Malagasy rehetra omaly, nandritra ilay fihaonana teo amin’ireo kandidà roa, hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena.
Araka izany, nentin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, nanoloana ny vahoaka manerana ny Nosy ny hafatra sy ny fanazavana rehetra ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara sy ny fari-piainan’ny Malagasy.
Nilaza ny kandidà Marc Ravalomanana fa izy no hitondra ny vahaolana rehetra amin’ny fahasahiranan’ny firenena sy ny mpiara-belona. Anisan’izany ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ny fampakarana ny harinkarem-pirenena, ny famahana ny olana eo amin’ny famokarana herinaratra, ny ady amin’ny kolikoly, ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana teny izy, ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ny famerenana amin’ny laoniny sy fiarovana ny tontolo iainana, ny fananganana fotodrafitrasa maharitra, indrindra fa ny lalana, ny famahana ny olan’ny mpandraharaha, ny fametrahana ny vidin’ny solika tena izy, ny fanampiana sy fanosehana ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy, ny fanamafisana ny fiarovana ny sisin-tany sy ny fari-dranomasin’i Madagasikara, ary ny ady amin’ny fitrandrahana ny harena an-dranomasina, sns.
Notsindrian’ny kandidà laharana faha-25 mafy fa tsy tokony hofitahina sy hampanofisina amin’ny fampanantenana poakaty sy tsy ho tanteraka akory ny vahoaka. “Izay tokony ho vita sy ho tontosa ihany no vitaina sy atao”, hoy izy nanamafy.
Tetsy andaniny, nambarany fa anisan’ny laharam-pahamehana amin’ny fandaharan’asany amin’ilay “Manifesto” ny famahana ny olana eo amin’ny herinaratra. Tsy hisy fampandrosoana, hoy izy, raha tsy mivaha ny olana sy ny fisian’ny delestazy, izay nambarany fa nanomboka ny taona 2009 no nisian’izany fahatapahan-jiro sy olan’ny herinaratra izany. Anisan’ny nasiany tsindrim-peo ihany koa ny mahakasika ny Fampihavanam-pirenena izay fototra iray hiaingana amin’ny famahana ny olana rehetra misy eto amin’ny firenena. Fa hentitra ihany koa ny kandidà Marc Ravalomanana nanambara fa tsy maintsy hapetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba ahafahana mampandroso haingana ireo faritra maro manerana an’i Madagasikara. Eo ihany koa ny famoronana asa ho an’ny tanora sy ny vehivavy…
Ankoatra izay, anisan’ny nanafintohana ny mpanaraka iny fihaonan’ny kandidà roa tonta iny kosa ny tsy fahalalam-pomban’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina. Tsy misy fanajana ny rehetra sy ny mpanatrika, ary indrindra ilay kandidà hafa nisian’ny fihaonana fa manao bontolo fotsiny amin’ny fandraisam-pitenenana. Nanamarika ilay fihaonana voalohany iny koa ny tsy famaliany ny fanontaniana amin’ny fanekena na tsia ny voka-pifidianana…
Nahitana tombontsoa goavana ho an’ny firenena ny dian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Frantsa farany teo mahakasika ny tontolo ara-toe-karena, satria dia nahafahany nihaona tamina tompon’andraikitra maro izany amin’ ny maha vahiny nasaina manokana azy ihany ...Tohiny
Minisitra Rivo Rakotovao : « Hahaleo tena ara-bary i Madagasikara afaka telo taona »